Yaa Haynaya Saliidaada? | Martech Zone
Maalin dhan - maalin kasta - dadyowgu i soo dir email, ii soo qor, iisoo dir, i soo booqo, i soo wac oo si deg deg ah iigu soo dir su'aalaha la xiriira domains, awoodaha, CSS, tartanka, istaraatiijiyadaha ereyada muhiimka ah, arrimaha macmiilka, meelaynta iibka, istaraatiijiyadaha suuq geynta, hubinta, baraha bulshada, iwm. Waxa laygu martiqaadaa inaan hadlo, wax qoro, caawiyo, la kulmo… adigu magacow. Maalmahaygu waa mashquul yihiin oo si aan caadi ahayn u fulinayeen Anigu ma ihi qof caqli badan laakiin waxaan leeyahay khibrad badan oo dadku way gartaan. Waxaan kaloo jeclahay caawinta.
Caqabada ayaa ah sida loogu dabaqo qiimaha mid kasta oo ka mid ah arrimahaas yar yar iyo fursadaha. Aragtideyda ayaa ah in ay lamid tahay sidii waagii hore oo saliida saliidu ay kaydin lahayd giraangiraha tareenka si ay si dhaqso leh oo fudud ugusii socoto wadada. Qaado saliida saliidda leh tareenka ayaa istaaga. Saliida waxay ogtahay meesha, goorma, sababta iyo intee. Waxaan dareemayaa sida saliidda saliidda leh - laakiin xagga qiyaasta ballaadhan. Su'aalaha la i weydiiyay waxay u baahan yihiin khibrad iyo khibrad aan soo dhisay 2-dii sano ee la soo dhaafay.
Way adagtahay in la qiimeeyo ama la xasuusto saliida marka aad leedahay tareen ka soo roganaya dhabbaha, in kastoo. Tareenka, dhuxusha, kirishbooyada, jidadka tareenka 'dhammaantood waa kharashyo' waaweyn 'iyo xalal' weyn 'oo si sax ah loo qiyaasi karo. Inaad saliideysato maaha wax fudud. Waan ogahay tareenku inuu si dhakhso leh u soconayo sida ay ahaan laheyd hadaanan saliideynin wadada - laakiin run ahaantii ma jirto hab hubaal ah oo lagu cabiro saameynta miisaanka noocan oo kale ah.
Ma lihid saliid? Waad ka iibsan kartaa ilahaas meelo kale ama adiga laftaada ayaa baaritaanka sameyn kara. Kaliya waxay ku dareysaa waqti, kharash, khatar waxayna yareyn kartaa tayada adeegga aad siineyso macaamiishaada. Waa inaad lahaataa saliid - urur walba waa inuu yeeshaa.
Tani ma aha dhawaajiyaan khushuucsan, laakiin aniga ah hoosaysiiya ra'yi, waxaan aaminsanahay in hoggaamiyeyaasha waaweyni ay badanaa yihiin shidaalka. Waxay si adag u shaqeeyaan maalin kasta si ay uga saaraan caqabadaha si kuwa ku hareeraysan ay u sii riixaan, u orod badan, oo ay u guuleystaan. Kooxuhu waxay jecel yihiin saliida sababta oo ah way ka faa'iideysan karaan si ay ugu guuleystaan. Su’aashu waxay tahay saliida saliidu miyay helaysaa ama miyaa loo aqoonsanayaa qiimaha ay leedahay.
Maxaa dhacaya markii la isweydiiyo qiimahaaga?
Miyaad joojisaa saliida saliidda oo aad tareenka khatar gelisaa sidoo kale aad la ciirtaa shaqaalaha kale ee adiga kugu tiirsan? Miyaad, halkii, ka daba joogtaa mashaariic waaweyn iyo fursado halka qiimahaaga gabi ahaanba la cabbiro oo la fahmo?
Mise you ma waxaad ku dhegan tahay waxa aad ku fiican tahay? Waxaa laga yaabaa inaad wadid guusha shirkaddaada - laakiin halistu waxay tahay in qaarkood aysan aqoonsan doonin, ogaadaan sida loo cabiro, uga mahadceliyo… oo had iyo jeer su'aal ka keeni doonaan. Adduunkan xogta iyo gorfeynta, haddii aadan ka jawaabi karin waxa qiimahaagu u yahay urur waxaa laga yaabaa inaad dhibaato ku dhacdo.
Ma waxaad tahay saliid? Miyaad saliid ku leedahay goobta shaqada? Yaa haya saliidaada?
Ka tag Domain-kaaga waxa aad qabato
Hab aad u xiiso badan oo leh fikradda “Oiler” iyo IMHO, waad ku saxantahay bartilmaameedka. Maalmahaygii fulinta, waxaan qaatay qaab ka yara duwan sidii aan kula talin lahaa maamulayaashayda ku saabsan maaraynta maantana fasallada maareynta waxaan u sheegayaa ardaydayda in shaqada maareeyaha: "ay tahay in la helo jawi ay shaqaaluhu ku guuleysan karaan" Tani waa hab kale oo iyaga oo u sheegaya inay iyagu mas'uul ka yihiin inay noqdaan kuwa shidaalka siiya "macdanta" ama shaqaalahooda oo aan daruuri u ahayn tareenka ama hay'adda.
Runtii waan jeclahay sarbeebta waana isticmaali doonaa mustaqbalka. Waad ku mahadsantahay boostada
Mahadsanid SBM! Mahadnaq ereyada naxariista leh!
Sida Loo Bilaabo Ganacsi South Carolina
Sarbeebta ayaa weyn. Feejignaan kasta oo faahfaahsan waa in diiradda la saaraa.
Jan 18, 2009 saacadu markay ahayd 10:56 PM
Waad ku mahadsan tahay markasta oo aad waqti u hesho inaad ka jawaabto su'aalahayga. Khibradaada iyo rabitaankaaga caawinta ayaa iga badbaadisay saacado badan oo raadinta iyo jahwareer ah.